Raw Boldenone poda (846-48-0) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Raw Boldenone powder ndiyo steroid inozivikanwa zvikuru yezvokurapa kwemhuka. Iyo ine yakakwirira kwazvo yevarume hormone uye inoshanda zvakasimba mu synthesis. Boldenone inoshanda uye yakasimba mukusimudzira musimba uye simba kukura. Kana iyo inotorwa nedzimwe mishonga, mushonga wayo wemishonga unogona kunge uri nani.
Raw Boldenone powder (846-48-0) Tsanangudzo
Raw Boldenone powder, inogadzira anabolic-androgenic steroid (AAS) uye 1 (2) -dehydrogenated analogue ye testosterone. semishonga yemishonga, inoshandiswa seBoldenone powder undecylenate, the undecylenate ester. Basa re boldenone rinonyanya anabolic, neine low androgenic potency. Raw Boldenone powder inowedzera nitrogen kuchengetedza, protein synthesis, inowedzera chido uye inokurudzira kusunungurwa kwe erythropoietin muitsvo. Raw Boldenone powder yakagadzirwa mukuedza kugadzira nguva yakareba inobata methandrostenolone (Dianabol), nokuda kweaorrogen inoshaiwa matambudziko.
Kemikari Name Boldenone; Dehydrotestosterone; 846-48-0; 1,2-Dehydrotestosterone
muchiso Name Boldebal H, Equipoise, uye Sybolin
Molecular Wsere 286.415 g / mol
Kunyorera Point 164-166 ° C
Birara Point 435.6 ° C pa 760 mmHg
Skukodzera 5.54e-05 mg / mL
APane Boldenone powder inoshanda zvakarongwa sean anabolic androgenic steroid. Yakashandiswa kuwedzera musimba kukura uye chido mune zvipfuwo nevanhu
Chii chinonzi Raw Boldenone powder (846-48-0)?
Boldenone inonzi 3-oxo-Delta (1), Delta (4) -steroid inoshandiswa ne oxo boka panzvimbo ye3 uye beta-hydroxy boka panzvimbo ye17. Icho chinonzi anabolic androgenic steroid yakave yakagadzirirwa kushandiswa kwemhuka. I17beta-hydroxy steroid, an anabolic androgenic steroid uye 3-oxo-Delta (1), Delta (4) -steroid.
Boldnlone imwe yeiyo yakakurumbira inoshandiswa muzvinyorwa zvechiremba, inoshandiswa mumishonga yezvokurapa. Mazinga ehomoni akawanda akakwirira kwazvo, maitiro ekugadzira anowedzerawo simba.Bao Dan ketone inogona kuva yakasimba, yakasimba uye yakasimba kukura musimba nesimba, zviri nani kana mimwe mishonga, ndiyo inonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zvezvipfuwo inzira inonyanya kuisa mushure mushure mekunge "kutenderera" imwe ye steroid (uye imwe boka remishonga, nezvimwewo). Mukuwedzera, mamiriro ezvinhu emuviri mumuviri womunhu anogona kubudisa maitiro eBoldenone.
Iyo yakakura sei Boldenone powder (846-48-0) mabasa
Boldenone, ine steroid anabolic yakagadzirirwa kushandiswa kwemhuka, Boldenone inowedzera nitrogen kuchengetedza, protein synthesis, inowedzera kudya uye inokurudzira kusunungurwa kwe erythropoietin muitsvo. Boldenone yakashandiswa pakuedza kuedza nguva yakareba inopindwa methandienone (dianabol), chaizvoizvo boldenone haina kuita se methandrostenolone. Iyo ine nguva yakareba kwazvo yehupenyu, uye inogona kuratidzira pane steroid test kusvika kumakore e1.5, nekuda kwenguva refu esecylenate ester yakaiswa kumubereki steroid. Tsvaga huwandu hwemishonga inogona kuwanikwa nyore nyore kwemwedzi mushure mekurega kushandiswa.
Boldenone powder inogona kuwedzera kuzora kwe nitrogen, protein synthesis, inowedzera kudya uye inokurudzira kusunungurwa kwe erythropoietin muitsvo. Bodybuilders nevatambi mumitambo yakasiyana-siyana vakashandisa Boldenone kuvaka misi uye kusimbisa kushanda. Kunyange zvazvo vanabolic androgenic steroid inogona kuwedzera kuonda kwemisimba, simba uye kukwanisa kudzidzisa kwenguva yakareba uye zvakaoma.
Tenga Boldenone powder (846-48-0) kubva kuBuasas.com